Ny chips M1X dia hampidirina ao amin'ny MacBook Pro | Avy amin'ny mac aho
Amin'ity fotoana ity ao amin'ny sarimihetsika dia tsy isalasalana isika fa Apple dia mety mieritreritra ny handefa processeur nohatsaraina ho an'ireo maodely MacBook Pro manaraka, amin'ity tranga ity, ny M1X dia antsoina hoe mpisolo toerana ny M1 ankehitriny.
Azo atao ny manampy ny MacBook Pro vaovao misy fanavaozana ity processeur ity ary manafoana ny sary famantarana Apple avy eo aloha, izany hoe ho fisaka tanteraka izy ireo, raha tsy misy ny sary famantarana Apple na aiza na aiza. Misy ny tsaho milaza izany Ireo ekipa misy 14 sy 16 santimetatra ireo dia hanana ity processeur nohatsaraina ity.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nanazava tamin'i Bloomberg ilay mpivarotra fanta-daza, Mark Gurman, fa Modely MacBook Pro 14-inch sy 16-inch ho avy hanana chip vaovao izy ireo izay hanatsara ny hery sy ny fahombiazan'ny MacBook Pros amin'izao fotoana izao. Amin'ity tranga ity dia nilaza aho fa hanampy CPU CPU 10-core miaraka amina core valo avo lenta ary 2 core tena mahomby amin'ny resaka fanjifana. Ireo ekipa ireo dia hanampy GPU mifanentana miaraka amin'ny fahatsiarovana hatramin'ny 64GB sy seranan-tsambo fanampiny Thunderbolt.
Izany rehetra izany dia ampiana amin'ny tsaho farany navoakan'izy ireo tao 9to5Mac manondro "loharano misy rakipeo tsaho" ka tsy isalasalana fa afaka mieritreritra an'izany isika Apple dia hamoaka processeur nohatsaraina tamin'ity taona ity fa tsy hiantso azy hoe M2Hivoaka amin'ny taona manaraka ity miaraka amin'ny fanatsarana bebe kokoa amin'ny M1X izay azo havoaka amin'ny faran'ity taona ity. Tsy misy isalasalana fa hanana hetsika isika amin'ny resaka processeur ary Apple dia afaka manavao ny M1 ankehitriny izay efa ao anatin'ny iPad Pro farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Ny chips M1X dia hampidirina ao amin'ny MacBook Pro vaovao
Apple dia efa mivarotra ny Sony PlayStation DualSense Wireless Controller ho an'ny PS5 ao amin'ny tranokalany